လိင်စိတ်သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်အင်တာနက်အပြာစာပေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - ကျား၊ မကွဲပြားမှုကိုဖော်ပြသည့်စနစ်တကျစာပေပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2017) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအပေါ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ်ဦးကစနစ်ကျသောစာပေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းထုတ်ဖော်ကျားခြားနားချက် (2017)
, V. ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင် (2017) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအပေါ် Internet ညစ်ညမ်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု: ကျားခြားနားချက်ထုတ်ဖော်တစ်ဦးကစနစ်ကျသောစာပေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ သြစတြေးလျ, 17 (4) ကိုဆုံးမ။ စစ။ 16-21 ။
နောက်ခံသမိုင်း: သြစတြေးလျ၏တစ်ဦးကသိသိသာသာအဘို့ကိုသြစတြေးလျနေအိမ်များအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်များ၏ကျယ်ပြန့်ကလေးမွေးစားခြင်းနှင့်အတူအချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း (IP) ရှုမြင်ကြသည်။ သို့သော် IP ကိုကြည့်ရှု၏ဆိုးကျိုးများသာ IP ကိုကြည့်ရှုရာမှဦးနှောက်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအပါအဝင်ထင်ရှားလတံ့ဖို့စတင်နေကြသည်။ သို့သော်လူရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ်သက်ရောက်မှုဘာတွေလုပ်နေလဲ?
Method ကို: တစ်ဦးကပုံဖွဲ့စည်းခဲ့စာပေပြန်လည်သုံးသပ် synthesising နှင့်နောက်ဆုံးသုံးနှစ်အတွင်းထုတ်ဝေသောပါဝင်စံတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းဆောင်းပါးများအပေါ်သတင်းပို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအပေါ်အိုင်ပီရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရည်မှတ်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်စာပေ collate မှဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ရလဒ်များ: စာပေကိုဖြတ်ပြီးဖော်ထုတ်အဓိကရလဒ်တခုကျားမပြဿနာအဖြစ်အိုင်ပီဖြစ်ခဲ့သည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို IP ကိုအသုံးပြုမှုကိုအကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိခဲ့သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုများအထူးသဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်အထီးကြီးစိုးနှင့်ကြီးစိုး themes များနှင့်အတူ IP ကိုကြည့်ရှုသောသူသည်မကြာခဏအသုံးပြုသူများအတွက်, ယောက်ျားတို့အတွက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သျောလညျးအထီးအသုံးပြုသူအမျိုးသမီးမိတ်ဖက်တိုက်ရိုက်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့် Self-ယုံကြည်ချက်ဖို့အများကြီးအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့်အတူထိခိုက်နေကြသည်။
နိဂုံး: စာပေ၏အရေးပါသောပေါင်းစပ်မှုကအိုင်ပီ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်ကျယ်ပြန့်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ စာပေများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည် IP ၏အမျိုးသားရေးလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အထင်ကရသဘောထားများ၊ ခွင့်ပြုထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစာသားများ၊ ပိုမိုဆိုးရွားသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများ၊ IP အသုံးပြုမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၌ကျား၊ မကွဲပြားမှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်အားရမှုနည်းခြင်းနှင့်စိတ်သောကရောက်ခြင်းတို့ကိုဖော်ပြသောလိင်နှစ်ခုလုံးနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များက IP ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုသိရှိနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ တိုင်ပင်မှူးမတ်များသည်ပုံမှန်သုံးစွဲသူများဖြစ်သည့်အထီးတစ် ဦး ချင်းစီတွင်အတူတကွဖြစ်ပေါ်နေသောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပြီး၊ ဆက်ဆံရေးပြသနာများနှင့်မကျေနပ်မှုများတွင်အဓိကပြissueနာအဖြစ် IP ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။